Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Barbados » Ny fitsangatsanganana any Barbados dia nibolisatra tamin'ny fahatongavan'ny datin'ny Jolay
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Barbados dia, ary manohy miatrika ny tafiotra COVID-19, saingy na dia sarotra ho an'ny indostria aza io vanim-potoana io, dia faly ny BTMI nahita ireo tsimoka fitomboana tato ho ato.
Mpandeha fiaramanidina 10,000 no tonga tany Barbados.
Ny indostrian'ny fizahantany any Barbados dia nandrakitra an-tsarimihetsika lehibe ny fizahantany tamin'ny Jolay.
Ny fizahan-tany any Barbados dia mahita fiovana tsara ho an'ny indostria alohan'ny vanim-potoanan'ny ririnina 2021/2022.
Barbados dia nandrakitra fahatongavan'ireo mpandeha an'habakabaka mahatratra 10,000 taorian'ny volana maro izay voadonan'ny areti-mifindra manerantany. Sambany nanomboka tamin'ny Desambra 2020, ny indostrian'ny fizahantany eto an-toerana dia nandrakitra dingana lehibe iray amin'ny fizahan-tany miaraka amin'ny antontan'isa farany avy amin'ny Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) milaza ny fiovana tsara ho an'ny indostria alohan'ny vanim-potoanan'ny ririnina 2021/2022.
Nandritra ny vanim-potoana Jolay 2021, mpitsidika 10,819 teo ho eo no nankany Barbados. Ity fitambarana ity dia nampiseho fiakarana marobe amin'ireo mpitsidika 6,745 raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana nifanandrinana tamin'ny Jolay 2020.
Nivoaka ambony i Etazonia (Etazonia) rehefa nanapaka ny fizarana 43.3% izy ireo, raha ny Fanjakana Mitambatra kosa (UK) dia nandray anjara tamin'ny 34.4% an'ny orinasa tamin'ny fahatongavan'ny 3,722 nandritra ny vanim-potoana nitaterana. Nitranga izany taorian'ny nanampiana an'i Barbados tao amin'ny lisitra fiambenana UK COVID-19 Green. Barbados dia sambatra napetraka tamin'ity lisitra fanindroany ity hatramin'ny nanombohan'ny aretin'ny COVID-19.
Nandritra io vanim-potoana io ihany, ny isan'ny fahatongavan'i Karaiba dia niisa 1,391 ary 390 tonga avy tany Kanada. Izany dia nampiseho ny fiakaran'ny fahatongavan'ireo tsena roa taona isan-taona.
Tale jeneralin'ny vonjimaika an'ny Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) , Craig Hinds, dia namaritra ny zava-bita ho toy ny dingana iray mankany amin'ny lalana marina aorian'ny ezaka tsy misy fitsaharana, na eo an-toerana na any ivelany, hananganana indray ny vokatra fizahan-tany.
Nanambara izy fa "Barbados dia, ary manohy miatrika an'ity rivodoza COVID-19 ity, saingy na dia sarotra ho an'ny indostria aza io vanim-potoana io, dia faly ny BTMI nahita ireo tsimoka fitomboana tato ho ato. Ity fitomboana ity dia vokatry ny ezaka mafy amin'ny varotra sy ny varotra eo amin'ny tsenanay ampitan-dranomasina amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra toa ny fampiroboroboana ny “Sweet Summer Savings”, ary koa ny fihazonana fiaraha-miasa matanjaka amin'ireo mpiaramiasa, sambo fitsangantsanganana ary fizahan-tany. ”
Tamin'ny volana jolay dia niara-niasa tamin'ny BTMI Sandals Resort rehefa nitondra onjam-peo iraika ambin'ny folo tany Etazonia avy any amin'ny tanàna iraika ambin'ny folo hankany Barbados izy ireo hanomezana tombony ny mpihaino handrombaka fialan-tsasatra mandritra ny efatra andro / telo alina any Sandals Resort any Barbados. Nalefa mivantana ireo onjampeo Sandal Royal Barbados ary nahitana tompon'andraikitra fizahan-tany notarihin'i Sen. the Hon. Lisa Cummins, minisitry ny fizahantany sy ny fitaterana iraisam-pirenena. Ny fampiroboroboana, izay notohanan'ny American Airlines ihany koa, dia nahatratra mpihaino 4,000,000+.
MAMERITO SSENFUMA hoy:
23 Aogositra 2021 amin'ny 20:20
Ny fizahan-tany ekipa Team Barbados efa vita tsara amin'ny asa lehibe. ny fiaraha-miasa, ny fandrindrana ary ny fiaraha-miasa ary ny fihazonana fiaraha-miasa matanjaka amin'ny mpiara-miombon'antoka fizahan-tany rehetra dia ho fanalahidy amin'ny fampiroboroboana ny toerana fizahan-tany taorian'ny valan'aretina covid-19.